Alshabaab oo ka hadlay sababta ay u dileen Taliye Ku-xigenkii Waaxda Socdaalka iyo Jinsiyadaha – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Alshabaab oo ka hadlay sababta ay u dileen Taliye Ku-xigenkii Waaxda Socdaalka iyo Jinsiyadaha
Mareeg.com: Xarakada Alshabaab ayaa sheegtay dilka Taliye Ku Xigeenkii Waaxda Socdaalka Iyo Jinsiyadaha Soomaaliya, Maxamuud Cadbi Caddow (Dhabarey) oo shalay duhurkii lagu dilay Isgoyska KM4 ee magaalada Muqdisho.
Afhayeenka Alshabaab ee howlgalada, C/caziiz Abuu Muscab ayaa sheegay in Alshabaab weera gaadmo ah ku dileen sarkaalkaas, wuxuuna sidoo kale ka hadlay sababta loo beegsaday.
“Mujaahidiinta ayaa weerar gaadmo ah ku dilay Taliye Ku Xigeenkii Waaxda Socdaalka Iyo Jinsiyadaha” ayuu yiri Abuu Muscab oo shir jaraa’id oo uu qabtay lasoo dhigay baraha Internet-ka.
Abuu Muscab ayaa ka hadlay sababta Alshabaab ninkaas u beegsadeen, wuxuuna yiri “Waxaa laga yaabaa in dadku is yiraahdaan ninkaas howlo shacab ayuu ka shaqeynayey ee maxaa loo beegsaday, sababta ninkaas loo beegsaday waxey aheyd inuu ka tirsanaa Hay’adda loo yaqaano Interpol ee ay leeyihiin Yahuudda iyo Kiristaanka”.
Isagoo sii hadlaya ayuu Muscab yiri “Interpol waxey ugaarsataa Muslimiinta, gaar ahaan Mujaahidiinta u dagaallamaya xaqooda, dad badan oo ay qaqabatay ayaan ilaa hadda la ogeyn halka la geeyey” ayuu sidoo kale yiri Abuu Muscab.
Mas’uulka shalay lagu dilay Muqdisho ayaa muddo dheer ka shaqeynayey Waaxdaa Socdaalka iyo Jinsiyadaha dowladda Soomaaliya.
RW Cabdiweli: Khilaafku wuxuu sababi karaa in la gaari waayo Hisgiga 2016
Muxuu Jawaari ka yiri mashaqadii shalay ku qabsatay baarlamanka?